Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Cusub hey! Kafe Thriving ee Hindiya
Iyada oo ay jirto masiibo burburisay warshadihii tafaariiqda oo sababay in la xidho noocyo badan oo tafaariiqeed, Hey! Kafe waxa ay soo baxday in ay horumarsanayso. Cabitaanada dhijitaalka ah ee ku saleysan Indonesia ayaa si guul leh uga furay 60 dukaan gudaha Indonesia tan iyo markii la aasaasay bishii Juun 2020 waxaana lagu wadaa in ay ballaariso ilaa 300 dukaan dhamaadka 2022.
haye! Kafe waa maskaxda Edward Djaja, 26, aasaasaha Seven Retail, kaas oo leh dhowr nooc oo tafaariiqeed ah sida Golden Lamian, oo ah hormuudka Shiinaha ee Fast-Casual Chain oo leh in ka badan 70 bakhaar Indonesia tan iyo markii la aasaasay 2017.
"Halkan ku hay! Kafe, mitirka xiddiga woqooyiga waa kobaca iibka dukaanka, kaas oo u suurtageliya sumadda si uu u gaaro dhaqaalaha cutubka. Waxaan ku hanweynahay in aan sheegno in istaraatijiyadeenu ay keentay in dib loo soo celiyo wax ka yar 12 bilood, taas oo muhiim u ah in aan si degdeg ah u cabbirno qaab waara sanadaha soo socda," ayuu yiri Edward.
Leyser diiradda saaraya horumarinta alaabta iyo qanacsanaanta macaamiisha
Si loo gaaro mitirka xiddiga woqooyiga, Hey! Kafe waxay si joogto ah u maalgelisaa summaynta iyo horumarinta alaabada cusub. Adigoo isticmaalaya habraaca horumarinta alaabta soo noqnoqda iyo sayniska, Hey! Kafe waxa ay awood u leedahay in ay tijaabiso in ka badan 20 fikrado badeecad ah bil kasta. Tani waxay keentay in la laayo noocyo kala duwan oo cuntooyin caan ah oo sida aadka ah loo iibiyo, sida Taxanaha Hey-Shake!, oo ay ku jiraan Strawberry Heaven Hey-Shake iyo Choco-Cashew Hey-Shake, iyo kuwo kale.
Naqshadeeda gaarka ah iyo meelaynta, Hey! Kafe waxay si cad u bartilmaameedsanaysaa da'yarta iyo miilaadiga - dadka ugu badan da'da Indonesia - sida suuqa ugu weyn. Bixinta cabitaanno kala duwan oo qiimo jaban leh, Hey! Kafe ayaa aad caan uga ah kun-sano-yada, iyadoo in ka badan 12,000 oo koob oo cabitaanno ah la iibiyo maalin kasta.
Qaabka iftiinka hantida oo ay taageerto tignoolajiyada
Ballaarinta degdegga ah ee summada waxaa taageeray moodal-iftiin hanti. Inta badan xarumaha summadaha waxay ka kooban yihiin buudhyo is haysta oo yareeya kharashaadka raasumaalka oo fududeeya adeegga Grab & Go. Qiyaastii 70% iibka summadadu waxay ka kooban yihiin dalabaadka gudbinta onlaynka ah. Astaantu waxay kaloo bixisaa nooc shuraako ah, oo la mid ah kuwa jecel silsiladaha dukaamada ku habboon ee Indonesia.
Qaabka ganacsi ee shirkadu waxa uu soo jiitay indhaha maalgashadayaasha, sida Trihill Capital, oo ku taageertay shirkadda wareeggii abuurka. Iyadoo la ilaalinayo qaabka iftiinka hantida, shirkadu waxay rajeyneysaa inay diirada saarto kheyraadka kor u qaadista qiimaha astaanta iyo maalgelin dheeraad ah oo tiknoolajiyada.
Waxaa socda qorshayaal lagu bilaabayo arjiga mobilada ee guriga dhexdiisa laga bilaabo 2022, si loo siiyo 350,000 macaamiishooda bishiiba khibrad gaar ah oo aan xidhiidh lahayn.